स्वतः खारेज गर्न मिल्छ प्रधानन्यायाधिश कार्कीको महाअभियोग, कसरी ?
– सोम खनाल हठात् रुपमा देशकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बिरुध्द महाअभियोग प्रस्ताब संसदमा दर्ता गराइ प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारद्वारा निलम्बनमा पारिएको र सोको बिरोधमा सर्बोच्च अदालतमा परेको रीटउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्बोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशलाई काममा फर्काएका घटनाहरूउपर पक्ष-बिपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् । तर...
युवा र सकारात्मक सोच
- रामजी अधिकारी हात बाँधेर हुन्न अब - जाग्नुपर्छ युवा शक्ति । आजै अहिल्यैबाट राम्रो काम थाल्नु पर्छ युवा शक्ति।। भोली भोली भन्दै जाँदा आधा उमेर गईसक्यो । अहिल्यै देखि देशको विकासमा लाग्नु पर्छ युवाशक्ति ।। “युवा” शब्दलाई उल्टोबाट पढौ त ! “वायु” हुन्छ । आजसम्म युवा भन्ने वित्तिकै आँँधी,तुफानसंग लगेर जोडेको तुलान। गरेको अधिक...
स्थानीय तहको चुनाव र उम्मेदवार
देवीप्रसाद गौतम स्थानिय तह भनेको के हो ? नेपालमा संविधान धेरै पटक बने । राणा शासनकालमा २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीले संविधान मस्यौदा गरेका थिए रे तर लागू भएन । २००७ सालको आन्दोलन पश्चात २००८ सालमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम विधानले २०१४ १५ तिर संसदीय चुनाव भयो । सरकार बन्यो तर २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले व्यवस्था च्युत गरे...
स्थानीय तहको निर्वाचन र मकवानपुर
अहिले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे बहस छ । मकवानपुरमा पनि निर्वाचनलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । स्थानीय तहबारे नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थापिका तीन तहको हुनेछ -संघीय प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तह । स्थानीय तह भनेको जनताको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्ने थलो हो । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र भेट हुनेछ ।...
के हो हस्तकलाको महत्व ?
–ज्ञानभक्त लामा परापूर्व कालदेखि आजसम्म नेपालको चिनारीका रुपमा अग्र स्थानमा हस्तकला रही आएको छ । नेपाली हस्तकलाले देशको चिनारीमात्र होइन अन्तराष्ट्रिय जगतमा मौलिक पहिचान गराएको छ भने विदेशी मुद्रा भित्राउने र रोजगारीको सिर्जनामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यद्यपी देशको विद्यमान समस्या, असहज परिस्थिती र बढ्दो...
यसरी जन्मियो मानव सेवा आश्रम !
रामजी अधिकारी सर्वोत्कृष्ट जीवन: शाश्वत चिन्तन संस्थाको माध्यमबाट हेटौंडामा साँचो जीवन निर्माण अभियान संचालन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बार्षिकोत्सव मनाउने सिलसिलामा अभियानका अभियन्ताहरु र अभियानका सुवेच्छुकहरुले ०६९ जेठ २३ गते हेटौंडा –२ स्थित वनसखण्डी मन्दिरमा सह–भोज कार्यक्रममा आयोजना गर्ने योजना बन्यो । सह–भोजलाई अझ...
भविष्यको मानव !
–संप्रस पौडेल “दिवस” पौराणीक कथामा सुने अनुसार देवता र राक्षसहरु ठूला ठूला आकारका हुन्थे । त्यसैले लडाइँमा ढलेपछि पृथ्वी नै कम्पन हुन्थ्यो । स्तम्भकार भन्छ, जसरी डायनासोर आजको छेपारो भयो आजको मान्छे भोलीको उपियाँ हुन के बेर ? हनुमानका बाँदर सेनाले समुन्द्रमाथि सेतु बाँधी लंका ध्वस्त पारेको कथा आजको समुन्द्रमाथि पूल र कुवेरले...
सहकारी,दुःख सुखको साथी
राजु गौतम सहकारिताको उत्पत्ति र विकासको कुरा गर्ने हो भने परापूर्व कालदेखि अर्थात मानव सभ्यताको शुरुवात देखि नै यसलाई अपनाइएको पाइन्छ । किनभने यसको शब्दबाट स्पष्ट हुन्छ की एकल प्रयासबाट कुनै काम सम्पन्न गर्न नसकिने भएकोले यसको जन्म भएको हो । आधुनिक सहकारीको बारेमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा विश्वमा जब पूँजीवाद हावी हुँदै गयो सीमित...
यसरी विकास भयो गुम्बाडाँडा
हर्क रम्तेल स्थापना : गुम्बाडाँडा क्षेत्रमा रहेको बस्ती हटाएर २०३५ सालमा यहाँका मानिसलाई चितवन पठाइएको पाइयो । त्यसपछि २०४२ सालमा यो क्षेत्रमा वृक्षरोपण भएको हामीले पायौं । त्यसको नेतृत्व पूर्व गाविस अध्यक्ष शिवबहादुर रिजाल, राधेश्याम शर्मा, अरुण खतिवडा, प्रेम बराल, गोपाल थापालगायतले गर्नुभएको थियो । अमृतलाल जोशी त्यो समयमा...